Ndingaphumelela njani ngePinterest? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 338
IPinterest liqonga namhlanje elinika abantu imvume yokubonisa okusemandleni abo kunye namaphupha abo malunga neeprojekthi zexesha elizayo abafuna ukuzifezekisa. Kuko konke oku, umboniso wonyamezelo uyimfuneko, kodwa ngaphezulu kwako konke, ukusebenzisana okuza kusebenza njengeyona ndlela ibalulekileyo yokuphumelela.
Nangona amanye amaqonga ekucela ukuba ubonakale kwiividiyo ubuncinci imizuzwana eli-10 ngaphakathi kwawo nawaphi na amaphepha, kwiPinterest kwenzeka okwahlukileyo. Enye yezinto abantu abanomdla wokuphumelela kwinethiwekhi kufuneka bayenze kukudala amathuba kunye nemibono yoluntu.
Abantu abajonga ukhetho kwiPinterest babona okona kulungileyo kubo ukuvuselela izindlu zabo, indawo zokusebenzela kunye nokuqala iiprojekthi zobuqu. Ndiyabulela kuko konke oku, yonke into ebonwa eqongeni iya kunyanzeliswa.
Abasebenzisi abaninzi babonise oko IPinterest lelinye lamaqonga alungileyo Oko ibikukuzalisekisa amaphupha kunye nemibono yabasebenzisi namhlanje. Ukusukela ekudalweni kwayo, khange ikwazi ukungaziwa umzabalazo ozigcinayo ukuba ungafani nezinye iinethiwekhi kwaye ngenxa yoku, thintela iingxaki ezizayo.
Ngeli xesha, uya kufunda kancinci malunga nendlela yokuphucula umgangatho wento eyenziweyo ngaphakathi kwePinterest kwaye ngaphezulu kwako konke, indlela onokuthi uqhubeke ngayo nayo yonke into yokuyila ekufuneka uyonwabele.
Nxibelelana nezinye iinethiwekhi
Kuxhomekeke ekubeni yeyiphi imisebenzi eza kuphehlelelwa kwiPinterest kwaye ngaphezulu kwayo yonke loo nto, imifanekiso ekufuneka bayiphuhlisile, licebo elihle ukusebenza kwezitshixo zonxibelelwano.
Eli thuba liya kwamkela abanye abasebenzisi ukuba babone yonke imixholo emitsha ekufuneka bayinike ngexesha elifanelekileyo. Ukongeza, izibhengezo ziya kufika ngalo lonke ixesha kunye neendawo ukufezekisa iziphumo ezingcono.
Yenza i-URL yakho ngokwezifiso
Ukuba ufuna abanye abantu bakufumane kwiinjini zokukhangela, kuya kufuneka uguqule i-URL ukuze ufumane iziphumo ezingcono. Ukusuka apho, abantu baya kuba nokugqibelela ngena ukusuka naphi na kwiqonga lakho lePinterest.
Chaza imifanekiso yakho
Xa usenza ibhodi, okanye ngokwenza nje izikhonkwane ezitsha kubaluleke kakhulu ukuba ubeke inkcazo. Oku kuya kunceda abasebenzisi ukuba bazi ukuba uvela phi kwaye uyaphi ngaphandle kokumba kwaye ungafumani into abayifunayo okanye abangenayo.
Ikwangumbono olungileyo ukuphumeza lonke ulwazi lwe-SEO onokuyifumana okanye ufuna ukuyifumana. Ngaphandle kwamathandabuzo, enkosi koku, abantu abaninzi banokukufumana eqongeni.
Yintoni ongayenzi kwiPinterest?
Ngoku, kubalulekile ukuba wazi ukuba zeziphi izinto ezingafanelekanga ukuthatha inxaxheba kwiPinterest.
Kuya kufuneka uphephe ukuthumela imifanekiso engamanyala okanye ethe-ethe kwiPinterest
Awungekhe ukhubekise abasebenzisi eqongeni
Kuyimfuneko ukuba uphendule kuyo yonke imiyalezo ekwiPinterest
Izikhonkwane zokwabelana kufuneka zibe ebhodini ukulungiselela umbutho ongcono
Iakhawunti yakho iya kuphononongwa rhoqo ukuze yazi imisebenzi
1 Phumelela kwiPinterest
1.1 Nxibelelana nezinye iinethiwekhi
1.2 Yenza i-URL yakho ngokwezifiso
1.3 Chaza imifanekiso yakho
2 Yintoni ongayenzi kwiPinterest?
Iimpawu ezenza ukuba i-Gmail yahluke